Waxaan dhamaanteen waa ogyahay in YouTube waa mid ka mid ah website-yada video qaybsiga ugu Madaxdii Gaalowday oo meesha aad ka heli kartaa wax kasta iyo wax kasta oo qaab video ah. Waa faa'iido si siman loogu talagalay dadka ka soo dhammaan qaybaha nolosha. Sidaas darteed haddii aad tahay xirfadle ah, waxaa laga yaabaa in aad ka heli mid ka mid ah Hanuuniyaa xirfadeed ka wareysiyo diiwaan-geliyeen dadka guul duurka ku habboon, Casharrada video, bandhigyo mashaariic kala duwan iyo wax ka badan. Sidoo kale, haddii aad tahay arday waxaad ka heli kartaa ururinta aan dhammaadka lahayn oo ka mid ah qalabka waxbarashada ee in ka badan YouTube ah. Dhinaca kale, haddii aad tahay marwada guri oo aad rabto in aad ganacsi guriga ku salaysan sida furitaanka qurxinta dumarka ah, timo qurxin, cookies la dubayo ama beerta iwm, waxaad ka heli doontaa cajalado badan in aad ku caawin doontaa inaad waxtar aad riyooyin rumowday. Marka la soo koobo, YouTube leedahay wax badan oo ka mid ah faa'iidooyinka iyo waxa ay leedahay ururinta weyn oo videos.
Waxaad si xor ah qulquli karaa, watch, geliyaan videos ah. Laakiin mararka qaarkood, waa in aad dareentay in inta aad isku dayi for uploading video ah, aad soo gaarto noocyo kala duwan oo dhibaatooyin ka in dhamaan koombiyuutarka faylka xaddidan, ama aan lagu guulaysan. Haa, in si dhab ah waa ceeb iyo markii dib markii tijaabooyin badan, ugu dambeyntii aad ka heli lahayn natiijada barwaaqo ah, waxa uu helo heer sare diiqayo iyo sidoo. Sidaa awgeed, haddii aad abid wajaho, dhibaato ama aad hadda raadineyso qaar ka mid ah xal run ah in ajandaha in aad MP4 ma gali kartaa in YouTube, ka dibna aad tahay wadada saxda ah, sababtoo ah intan yar ee qoraal ah ayaa helay qaar ka mid ah xal dhab ahaantii wax ku ool ah si ay u wax looga qabto dhibaatadaada.
Part1, Waa maxay sababta aan gali kartaa MP4 in YouTube Video
Part2, Sida loo Beddelaan MP4 in Qaabka YouTube?
Part3, Haddii Video waa mid aad u dheer, MP4 Goo Video
Waxaad ka heli doontaa tiro badan oo dad ah kuwaas oo sheegay, "ma Waa maxay sababta aan MP4 gali kartaa in YouTube video?" Maxay dadka inta badan ka heli markii uu isku dayay in ay geliyaan video ah on YouTube waxaa ka mid ah:
Dib u dhac aan loo baahnayn in file koombiyuutarka
Waqti dheer oo maxkamadda hore ee uploading file ka dib, line a muuqataa on Hadalku screen, "Uploads ku guulaysan,", "Request lagu beegay-out", "Error" iyo qaar kale.
Mararka qaarkood waxa aad ka helaysaa war qoraal ah oo u muuqda shaashadda oo sheegay, "qaab File aan la aqoonsan yahay".
Sababaha dib u dhac sida ay si fiican u faah marinka soo socda. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aan u soo guurto ku soo wajahan, ka dhigo qaar in aad heshay xiriir ah oo si fiican u shaqeeya internet sababtoo ah iyada oo aan in aadan xataa ku riyoon karo oo ku saabsan uploading mid ka mid ah faylka sida MP4 in YouTube .
Sababta 1: MP4 codec aan taageerayaan YouTube
Out of dhan sababaha koombiyuutarka fashilmay ee MP4 in YouTube, mid waa codec ee faylka. Badanaa YouTube aqbalo files MP4, laakiin u baahan in codec gaar ah u faylka. Sidaas, haddii aad isku dayayaan in ay geliyaan file a in website-ka ayaa sheegay in (YouTube) iyo waa in qaab MP4 laakiin codec ee video ama maqal ah ma ku haboon yahay mid ay aqbaleen ka dibna waxa ay ka dhigi doonaa dhibaatooyin ka mid ah koombiyuutarka lagu guulaysan ama ma, at dhan.
Xalka: Wondershare Video Converter Ultimate
Beddel qaab file in qaab YouTube ay gacan. Qaar badan oo ka mid ah converters file online oo bixi karo waxaa laga heli karaa in la sameeyo hawshaas wax ku ool ah oo aad u. Mid ka mid ah converters file lagu kalsoonaan karo oo ah wakhtigii waa "Wondersahare Video Converter Ultimate". Waxa ay taageertaa in ka badan 150 qaabab File iyo qaab YouTube waa mid ka mid ah 150 ama ka badan oo ah qaabab file.
Sababta 2: MP4 yahay mid weyn oo
Size of video wuxuu sidoo kale saamayn koombiyuutarka faylka. Waaweyn waa size, sii jiri doono muddo waqtigii koombiyuutarka iyo haddii inta ay socoto koombiyuutarka this, internet ka dibna laga badiyay si toos ah koombiyuutarka file ka heli doonaa gooyey ama joojiyeen.
Xalka: Wondershare Video Converter Ultimate waa Converter u bedela qaabab file ma aha oo kaliya laakiin sidoo kale waa xirmo buuxda in ay noqon doontaa caawinaad dhab ah si aad u gooyay tirada video ah in aad isku dayayaan in ay geliyaan on YouTube ama goobta kasta oo kale oo haddii aad Ma doonayo in aan u Gooyo aad sidoo kale la bixiyaa iyada oo doorasho ah compressing video ah.
Sababta 3: MP4 waa jabtay
Haddii file MP4 video ma aha dhawrsan oo loo bartey jebiyey markaas hubaal YouTube diidi doonaa oo u geliyaan. Waxaa jira sababo badan oo keeni in video ka jabay MP4 qaar ka mid ah sababaha ka mid ah; xun madax file, kaydinta warbaahinta aan habboonayn, iyo kuwo kale oo badan.
Xalka: Wondershare Video Converter Ultimate ayaa awood u ah dayactirka qaar ka mid ah files jabay. Sidaas, haddii aad leedahay sida file ah ka dibna waxa ay soo dhoofsadaan in Wondershare Video Converter Ultimate, oo waxaad isku dayi kartaa in ay cusboonaysiiyaan faylka si recode waxaa loo hagaajiyo tayada video ah. Hadda, aad leedahay video ah oo dhawrsan iyo hadda si fudud aad gali kartaa this MP4 in YouTube.
Sida ayaa lagu tilmaamay in qoraalka ku xusan in haddii aad u jeeda mid ka mid ah dhib ah in qaar ka mid ah uploading MP4 in YouTube ka dibna waxaa laga yaabaa in sababo dhowr ah ka dambeeya dhibaato, laakiin xalka kaliya oo si fiican ku daxalaystay oo dhan waa "Wondershare Video Converter Ultimate". Sidaas darted, haddii aad rabto in aad si loogu badalo file MP4 in ay qaab YouTube ah oo aadan hubaa ku saabsan sida loo sameeyo markaas halkan waa tilmaan dhamaystiran idiin, in tallaabooyin yar oo sahlan in la raaco.
Tallaabada 1 Download iyo rakib Wondershare Video Converter Ultimate
First of dhan aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo Converter taas oo ku xidh on qalab aad. Converter Tani waa lacag la'aan ah oo ah qiimaha u version maxkamad internetka laga heli karo, waa wax iska sahlan si loo soo dajiyo iyo aad samayn doono rakibidda guulaha qasabno yar.
URL Download: http://download.wondershare.com/video-converter-ultimate_full495.exe"
Tallaabada 2 MP4 Import
Tallaabada labaad ee geedi socodkan waxa weeye in ay soo dhoofsadaan MP4 in ay Wondershare Video Converter Ultimate. Waxaa mar kale waa hawl fudud badan. Waxaad si fudud u soo jiidi kartaa file in ay interface Converter ama aad riix laga yaabaa in icon file add u dooro file ka folder ee qalab aad iyo guji "ok".
Tallaabada 3 badalo MP4 in Qaabka YouTube
Marka aad faylka keeno si Converter ayaa sheegay, tallaabada xigta waa in la bilaabo diinta. Ka hor inta aadan si dhab ah u tagaan diinta video ah, xulo qaab ka dhalanaya file in uu noqon doono qaab YouTube ah, dabcan.
Tallaabada 4 MP4 Upload in Website YouTube
Marka aad samaysay oo dhan ee kor ku xusan tallaabooyinka ku xusan, in aad file diyaar u yahay inuu la uploaded in website-ka YouTube, si toos ah uga Wondershare Video Converter Ultimate ama sidoo kale aad u gali kartaa iyada oo xisaabtaada YouTube.
Mid ka mid ah sababaha loo gooyey ama koombiyuutarka fashilmay file on YouTube waa baaxadda video in. Xalka waa in la gooyaa qaybaha aan la rabin ama aan loo baahnayn oo ah video si loo yareeyo xajmiga ee koombiyuutarka guul.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ah qalab goynta video laakiin Wondershare Video Converter Ultimate waxaa aad loogu yaqaanaa, natiijooyinka ugu fiican ay deg deg ah oo lagu naalloon karo. Geedi socodka oo dhan si fiican u faah halkan 5 talaabo.
Ka hor inta aanad bilaabin video goynta dhabta ah, waxaad u baahan tahay qalab goynta ah: Wondershare Video Converter Ultimate. , Sidaas hore download Converter taas oo calan kor ku saabsan nidaamka. Converter waxaa lagu heli karaa lacag la'aan ah oo ah qiimaha internetka iyo rakibidda waa sharaxaadda is fudud iyo sidoo kale.
Hadda, aad leedahay si ay dajiyaan video MP4 in ay Wondershare Video Converter Ultimate. Waxaa mar kale waa hawl fudud badan. Waxaad si fudud u soo jiidi kartaa file in ay interface Converter ama aad riix laga yaabaa in icon file add u dooro file ka folder ee qalab aad iyo guji "ok".
Tallaabada 3 Goo MP4 in a New Video MP4, Kaasoo aan u beddeli doonaa Video ku Original
Sida, halkan, ujeeddada aasaasiga ah ee la isticmaalayo Wondershare Video Converter Ultimate waa in la gooyaa video si, ay doortaan tafatirka video iyo doorasho goynta iyo ka soo xusho fursadaha la heli karo sida tayada image, muddada iyo dadka kale ee aad dooratay. Si kastaba ha ahaatee, waxa ugu muhiimsan in la ogaado in ka badan ayaa halkan jooga, tayada image ma saameyn doono by video cut, laakiin waxa kaliya ay qeyb ka tahay in aadan rabin in aad file waa laga gooyn doonaa.
Tallaabada 4 dhoofinta Goo MP4 video si Qaabka YouTube
Hadda tallaabada xigta waa inay u dhoofiyaan faylka si qaab YouTube ah. Waa wax fudud in aad doorato qaabka file ka fursadaha kooxda interface ah oo guji "Beddelaan", qaab faylka wax laga beddelo si YouTube doono taageeray qaabeynta.
Talaabada 5 MP4 Upload in Website YouTube
Tallaabada Final ah geedi socodkan waxa weeye in ay geliyaan faylka si Website YouTube. Wondershare Video Converter Ultimate Fududeeyaa dadka isticmaala ay si toos ah u geliyaan files waxaa ka mid ka mid ah website-ka Social media sida YouTube iyo facebook iwm, laakiin waxaad sidoo kale xor ah si loo badbaadiyo video ee la gediyay at qalab aad ka dibna u geliyaan in ay website, isagoo saxiixay in in aad xisaabta website-ka, doorashada waa dhan idinkaa iska leh.
> Resource > MP4 > xalin, ma gali kartaa MP4 in YouTube